Fanambin’ny fitondram-panjakana : Hohatevenina ny traikefan’ny mpiasam-panjakana -
AccueilSosialyFanambin’ny fitondram-panjakana : Hohatevenina ny traikefan’ny mpiasam-panjakana
12/01/2018 admintriatra Sosialy 0
Fanamby napetraky ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny Asam-panjakana ny fanatevenana ny traikefan’ny mpiasam-panjakana mba tena hamokatra ho an’ny vahoaka malagasy. Mandeha ny fanatanterahana izany ankehitriny. Nisy ny fiaraha-miasa tamin’ny BFV- SG sy ny minisiteran’ny Asam-panjakana sy ny lalana sosialy amin’ny fanatevenana izay traikefan’ny mpiasam-panjakana malagasy izay. Omaly no nanatanterahana ny fanaovan-tsonia teo amin’ny roa tonta dia ny minisitry ny Asam-panjakana Maharante Jean de Dieu andaniny sy ny tale lefitry ny BFV-SG ankilany.
“ Hanofana ny mpiasam-panjakana mikasika ny fikirakirana ny lafin’ny ara-bola, ny mikasika ny Banky, ny mikasika ny “e-administration” ihany koa ny banky . Izany dia vokatry ny fiaraha-miasa 3P entina hampandrosoana ny asam-panjakana”, araka ny fanazavan’ny minisitra Maharante Jean de Dieu.
Ankoatra izay moa dia efa fandaharan’asan’ny minisiteran’ny Asam-panjakana mihitsy ny fanofanana ny mpiasam-panjakana ho matihanina amin’ny asany. Rehefa matanjaka sy mahay mantsy ny mpiasam-panjakana dia matanjaka ho azy ihany koa ny firenena. Isan’ny tanjon’ny minisitera amin’izany, hoy hatrany ny minisitra, ny hanatsarana ny lazan’ny mpiasam-panjakana izay malaza ho tsy ampy traikefa raha mitaha amin’ny mpiasan’ny tsy miankina.
Fa nandritra ity fotoana omaly ity ihany koa dia nanolotra fitaovana ho an’ny minisiteran’ny Asam-panjakana ihany koa ny Bfv izay ahitana solosaina, video projecteur, imprimante, appareil photo numérique, ordinateur de bureau. Tafiditra anatin’ny fifanaovan-tsonia izay natao omaly ity koa ny fanomezana tolotra isan-karazany avy amin’ny banky Bfv ho an’ny mpiasam-panjakana.